Madaxweynaha Xilka Ka Degey Axmed Siilaanyo Oo Ka Hadlay Dhibaaatooyinka Ugu Waaweyn Horyaal Qaranka Somaliland | Araweelo News Network | Araweelo News Network
Madaxweynaha Xilka Ka Degey Axmed Siilaanyo Oo Ka Hadlay Dhibaaatooyinka Ugu Waaweyn Horyaal Qaranka Somaliland
Hargeysa(ANN)-Madaxweynaha xilka ka degey Axmed Siilaanyo, ayaa ka hadlay mushkiladaha horyaal Qaranka Somaliland oo uu tilmaamay in ay qayb ka yihiin musuqmaasuqa, qabyaalada, saboolnimada, sicir-bararka, Aafooyinka Abaaraha iyo arrimo kale oo uu farta ku fiiqay, kuwaas oo sida uu sheegay u baahan qorshihii lagaga bixi lahaa.
Madaxweynaha xilka ka degey Axmed Siilaanyo, wuxuu arrimahaa Iyo kuwo kale kaga hadlay khudbad uu ka jeediyay munaasibadii uu xilka ku wareejiyay Madaxweynaha cusub ee Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo lagu qabtay qasriga Madaxtooyadda Somaliland.
Wuxuuna ku bilaabay sidan:-
v Xabkaha iyo Faleenka
v Xukuumadda cusubi waxay dhiirrigalinaysaa maalgashiga, wax wada-yeelashada iyo midnimadda shacabka Jamhuuriyadda Somaliland, si shaqo loogu abuuro dhallinyaradda dalkeena.
v Xukuumadda cusubi waxa ay casriyeyn doontaa hay’adaha dawladda.
v Xukuumadda cusubi waxay hirgelin doonaa nidaam hawl-gabka dadka waaweyn ee u soo shaqeeyey Qarankooda.
v Dhallinyaradda Jamhuuriyadda Somaliland ee dhammaysata Jaamacaduhu waxay qaadan doonaan 6 bilood oo ah SHAQO QARAN, si ay u helaan waayo-aragnimo shaqo.
v Xukuumadda cusub waxa ay u abuuraysaa ganacsatada iyo shirkadaha jawi iyo siyaasado dhiirrigeliya maal-gashiga, iyada oo ballanqaadaysa in hantida ganacsatadu hesho ammaan buuxa.
v Musuq-maasuqu waa AAFO QARAN oo mudan in aan Qaranimo iyo midnimo ku dabar-goyno.
v Musuq-maasuqu waa xaaraan, ciddii ku kacda ama sahashaa waa DAMBIILE QARAN oo mudan ciqaab.